निर्धक्क लगाउ कोरोना खोप - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
निर्धक्क लगाउ कोरोना खोप
नेपालमा २३ फागुनबाट समुदायस्तरमा कोभिड खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । तर, आम मानिसमा कोभिड खोपसम्बन्धी डर र भ्रम भने व्याप्त नै छ । यो भ्रमलाई निवारण गर्न सरकारबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम खासै हुन सकेको छैन । त्यसैले खोपको डर, भ्रम, यसका लक्षण र प्रभावकारिताका विषयमा केन्द्रित रहेर शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डा. शेरबहादुर पुनसँग गरिएको कुराकानी:
यतिबेला आम–मानिस कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा दुविधामा छन् । कोभिड खोप किन लगाउने ? प्रष्ट पारिदिनुस् न ।
अहिलेको अवस्थामा कोभिड–१९ बाट बच्ने एउटामात्र निर्विकल्प भनेको यो बिरुद्ध बनेको भ्याक्सिन नै हो । भ्याक्सिनको उद्देश्य मानिसमा कोभिडको संक्रमण हुन नदिने र यदि संक्रमण भइहाल्यो भने पनि जटिल अवस्थासम्म नपु-याउने र मृत्यु नहोस् भन्ने नै हो । त्यसैले कोभिडको भ्याक्सिन सबैले लगाउनैपर्छ । यस्तै, पछिल्लो समय विभिन्न देशमा भाइरसको उतारचढाव देखिरहेकाले सबैले निर्धक्क भएर कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । खोपले मानिसको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गरी नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न सक्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रभावकारी मानेको खोपलाई मात्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ । नेपाल आएका भ्याक्सिनहरु ५० प्रतिशतभन्दा बढी नै प्रभावकारी रहेको र यी खोपले विभिन्न अनुसन्धानका चरणहरु पार गरेको हुनाले निर्धक्क भएर खोप लगाउँदा हुन्छ ।
खोपले काम गरेको भन्ने कसरी थाहा पाउने ?
यो थाहा पाउनका लागि त एन्टी बडी परीक्षण गर्नुपर्छ । नेपालमा यो परीक्षण निःशुल्क छ जस्तो लाग्दैन । तर, खोप नै अनुसन्धानमा रहेकाले एन्टी बडी निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यस्तै, खोपले काम गरे/नगरेको देश र त्यो देशमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको भेरियन्टले पनि निर्धारण गर्दछ ।
खोप लगाएपछि कस्ता लक्षण देखिन्छन् ?
अहिले नेपालमा लगाइरहेको कोरोनाको भ्याक्सिनले विशेषगरी थकित हुने, टाउको दुख्ने, शरीर दुख्ने, ज्वरो आउने, काम ज्वरो आउने, अत्याधिक भोक लाग्ने, खोप लगाएको ठाउँ दुख्ने लगायतका लक्षणहरु देखिन्छन् । यस्तो समस्या देखिनु सामान्य हो, आत्तिनु पर्दैन । केहीदिन आराम गरेपछि आफैँ ठीक हुन्छ । यद्यपि, धेरै नै गाह्रो भयो भने लक्षण अनुसार कम हुने औषधि खान सकिन्छ ।
तर, कसैलाई लक्षण देखिने/नदेखिने हुँदो रहेछ, किन ?
सबैको शरीर एउटै हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले शरीर अनुसार कोभिड खोप लगाएपछि लक्षण देखिने/नदेखिने हुन्छ । भ्याक्सिन लगाएपछि ज्वरो आयो, अत्याधिक शरीर दुख्यो, टाउको दुख्यो भन्दै हामीलाई पनि सम्पर्क गर्नुहुन्छ । त्यो भनेको भ्याक्सिन लगाएपछि शरीरले प्रतिक्रिया जनाएको र रोग प्रतिरोधात्मक प्रणाली सक्रिय भएको मानिन्छ । तर, कसैकसैलाई कुनैपनि लक्षण देखिदैन । यसो भन्दैमा खोपले काम नगरेको भन्ने होइन । खोप भनेको हाम्रो शारीरिक प्रणालीभन्दा बाहिरको कुरा हो भन्ने कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन । त्यसैले खोप लगाउँदा शरीरमा लक्षण देखिनु वा नदेखिनु सामान्य कुरा हो । त्यसैले लक्षण देखिँदैमा आत्तिनुपर्दैन, खोपले काम गर्दैछ भन्ने बुझ्दा हुन्छ ।
दीर्घरोगी अर्थात् नियमित औषधि सेवन गरिरहेका मानिसहरुले कोभिड खोप लगाउनु हुँदैन भन्ने आममानिसको बुझाई रहेको पाइयो के यो साँचो हो ?
यो सरासर गलत हो । उच्च ज्वरो, शरीर दुखिरहेको, टाउको दुखेको अवस्था छ भने खोप लगाउनु हुँदैन । अरु सबैले खोप लगाउँदा हुन्छ केही फरक पर्दैन । मैले त शुरुवाती दिन देखि नै दीर्घरोगी तथा वृद्धवृद्धाहरुलाई सुरुमै प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउनुपर्छ भन्दै आएको हुँ । दीर्घरोगी अथवा नियमित औषधि सेवन गर्ने मानिसहरुले कोभिड खोप लगाउनु हुँदैन भन्नु हल्ला मात्र हो ।
यतिबेला कोभिड खोप लगाउन डराइरहेकाहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
डराउनु पर्दैन । किनभने हामीले लाएको र लगाउँदै गरेको खोपले अनुसन्धानका धेरै चरण पार गरेर छ । कोभिड खोपले गर्दा अहिलेसम्म कसैलाई पनि गम्भीर खालको स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न भएर अस्पताल भर्ना हुनुपरेको र मृत्यु भएको भन्ने अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छैन । त्यसैले नडराई भ्याक्सिन लगाउन सबैलाई अनुरोध गर्दछु । अर्को कुरा विश्वमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट पनि देखा परेको छ । जसले गर्दा कोभिड खोप लगाएर सुरक्षित महशुस गर्नुपर्छ ।
विश्वमा देखिरहेको कोरोनाको नयाँ भेरियन्टलाई अहिलेको भ्याक्सिनले काम गर्छ कि गर्दैन ?
यसका बारेमा अनुसन्धान भइरहेकै छन् । पछिल्लो समय दक्षिण अफ्रिकी भेरियन्ट भनेर चिनिने कोरोना भाइरसले अहिलेका भ्याक्सिनलाई चुनौति दिन सक्ने संकेत सहितको नतिजाहरु प्रकाशित भैरहेका छन् । वैज्ञानिकहरुले यसलाई थप अनुसन्धान गरी थप नतिजा आउने क्रम जारी छ । नयाँ भेरियन्टले चुनौति दिँदा अहिले चलिरहेको भ्याक्सिनलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले कोरोनाको नयाँ भेरियन्टलाई यी भ्याक्सिनले काम गर्छन् कि गर्दैनन्, अहिले नै भन्न सकिँदैन ।
खोप लगाएपछि कोभिड–१९ संक्रमित भइन्छ कि भइँदैन ?
खोप लगाउँदैमा संक्रमित नै भइदैन भन्ने होइन । खोपले कोरोनाको प्रभावलाई कम गर्ने मात्र हो । त्यसैले समुदायस्तरका सबै मानिसहरुलाई खोप नलगाउन्जेलसम्म जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अर्को कुरा कुनै पनि भ्याक्सिन शतप्रतिशत प्रभावकारी हुँदैनन् । कोभिड खोप पनि शतप्रतिशत प्रभावकारी छैन । विभिन्न देशमा खोप लगाइसकेका मानिसहरुमा पनि कोरोना पुष्टि भैरहेका छन् । त्यसलाई ‘ब्रेक थ्रु केस’ भनिन्छ । तर, खोप लगाएपछि कोरोना संक्रमण भएपनि सिकिस्त बिरामी भइँदैन ।